Fitaterana an-drenivohitra – Mitsipaka ilay fizarana tapakila elektronika ireo mpitatitra - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitaterana an-drenivohitra – Mitsipaka ilay fizarana tapakila elektronika ireo mpitatitra
Ny zotra 163 no nanaovana santatra tamin’ny tapakila elektronika
Tsy naha afa-po ireo mpitatitra ny fanandramana an’ilay fitaovana fizarana tapakila elektronika nokasaina hampiasaina eo anivon’ireo taksibe eto an-drenivohitra.
Ny zotra 163 sy ny Kofiamo mampitohy ny reni- vohitra amin’i Fenoarivo no nanaovana ity andrana ity, ny zoma teo.
Andriambinintsolomora Bernardin, filohan’ny federasionan’ny fitaterana an-drenivohitra sy ny manodidina sady filoha lefitry ny Uctu dia nilaza mazava fa “lasa vesatra ho an’ny mpitatitra indray ity fitaovana ity”.
“Maherin’ny iray tapitrisa ariary ny vidiny, nefa ny mpitatitra aza efa betsaka no tsy mahaloa patanty. Tsy maintsy mila olona fanampiny hatrany ihany koa hanara-maso ny fampiasana io tapakila elektronika io, ka tsy aleo ve ilay olona efa niasa teo ihany no beazina”, hoy ny fanazavan’ity farany.
Nanamafy izany ihany koa Randrianarisoa Arilanto, filohan’ny kaoperativa misy ny zotra 163. “Mandany fotoana ny fampiasana azy ary mbola sarotra ho antsika aloha hatreto”, hoy izy.
Ny tompon’andraikitra teo anivon’ny ministeran’ ny Fitaterana dia nionona tamin’ny filazana fa “mbola andrana fotsiny ihany no natao, ka tsy mbola misy zavatra maro azo ambara”.
Fitaterana, Mpanoratra Rijakely, 16.07.2012, 08:36	FIARAHAMONINA